Imtixaan mideysan oo wasaaradda Waxbarashadu ku adkeysaneyso! – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, ayaa ku adkeystay iney qaadeyso imtixaan mideysan, xilli khamiistii dalladaha waxbarashadu qaadaceen imtixaankaas.
Mas’uuliyinta Wasaaradda Waxbarshada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Xukuumada Fedraalka Soomaliya oo maanta marti ku ahaa barnaamijka Sahanka ee ka baxa Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa waxey kaga hadleyn qorshayaasha Wasaaradda ee ku aadan Waxbarshada Dalka.
Madaxda ka socotay wasaaradda Waxbarashada ayaa ugu hanjabay ardayda Soomaaliyeed ineysan heli doonin shahaado ay jaamacado debadda iyo gudaha ku dhigtaan haddii aysan gelin imtixaanka dowladda Soomaaliya qaadeyso.
Agaasimaha guud ee Wasaarada Waxbarshada, Maxamed Cabdiqaadir Nuur ayaa sheegay in Ardaygii aan galin imtixaanka dowladda aan lasiin doonin shahaado uu dibada ku aado ama uu gudaha dalka wax kaga barto.
“Imtixaanku qasab ma ahan in lagalo, dadka kuma qasbana, qofkii rabaa galaayo waa xuriyad laakiin go’aanku wuxuu yahay oo aan rabo in uu qofkasto maqlo oo berito war ka imaanin” ayuu yiri Maxamed C/qaadir.
“Imtixaankas qofkaan galin ma lahan shahaado uu dibada ku aado iyo mid uu gudaha ku aado midna ma helaayo, Wasaaraduna ma bixin doonto marka qofkasto asigoo sidaasi og waa in uu imtixaanku gala ama uu ka baaqdaa, waxaan rajeyneynaa oo aan Ummadda Soomaaliyed ka rajeyneynaa, Waalidkana ka rajeyneynaa in imtixaankas galaan oo ardaydu in imtixaan ay galaan loo ogolaado si shahaadada u qaatan” ayuu sidoo kale yiri Agaasimaha Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya.
Wasiiru Dowlaha Wasaarada Waxbarashadda Hidaha iyo Tacliinta sare ee Xukuumada Soomaliya, Cabdulaahi Bile Nuur ayaa tilmamay in Wasaaradda Waxbarashada 24 sano kadib ay dalka ka hirgalin doonto 30ka bishan May ee 2015 imtixaanadka Dugsiyada sare ee Dalka.
“Anaga hadaan nahay Wasaraadda Waxbrashada, waxaa qorshaha dhow inoogu jirta in aanu qaadno imtixaanka shahaada bixinta, imtixaankaasi oo dhici doono sida aad u sheegtay hadda 30 May, waxaana uu ka dhici doonaa 11 gobal ee uu ka koobanyahay Koonfurta iyo bartamaha Soomaliya” ayuu yiri C/llaahi Bile Nuur.
Dalladaha Waxbarashada Ahliga ah ayaa 7-dii bishaan shir jaraa’id oo ay ku qabteen Muqdisho ku sheegay in Imtixan mideysan uusan sanadkaan suurgal aheyn dalka Soomaaliya, iyagoo u sababeeyey arrimaha hoos ku xusan:-
1- Xaalad Nabadgelyo ee dalka ka jirta.
2- Iyadoo uusan jirin diyaar garow lagu qaadi karo imtixaan mideysan lagu qaadi karo.
3- Iyadoo uusan jirin xeerka Waxbarashada gaarka loo leeyahay.
4- Iyadoo uusan jirin Manjhan mideysan oo dhameystiran.
5- Imtixaanka oo aan hal mar la wada gaarsiin karin goobaha dugsiyadu ku yaallaan.
6- Iyadoo uusan jirin Imtixaan mideysan oo ay ku heshiiyeen wasaaradda Waxbarashada iyo dalladaha.
Wasaaradda Waxbarsahada, Hidaha iyo Tacliinta sare ee Xukuumada Federaalka Soomaaliya oo uusan hoos imaanin 1 dugsi sare ayaa mudooyinki ugu danbeeyay waday qorshayaal lagu diyaarinayo imtixaan la sheegay inuu yahay mid mideysan oo laga qaadayo ardayda fasalka 4-aad ee dugsiyada sare.
Khilaafka u dhaxeeya wasaaradda waxbarashada Soomaaliya iyo dalladaha ayaa laga cabsi qabaa inuu mugdi geliyo mustaqbalka arday badan oo Soomaaliyeed, haddii an dhinac tanaasulin.
Warka kasoo yeeray wasaaradda Waxbarashada ayaa lagu soo beegay iyadoo maanta oop sabti ah dallada ugu ballaaran dalladaha ahliga ah ee FPENES ay bilowday qaadista Imtixaanka Shahaadiga ee fasalaka ugu dambeeya dugsiyada sare, halka dallado kale imtixaankaas bilaabayaan 16-ka bishaan.
← Sawirro: RW Cumar oo khudbad ujeediyey baarlamaanka Soomaaliya → Madaxweyne Xasan oo guusha ugu hambalyeeyey R/wasaaraha UK, David Cameron